Madaxweynaha “Dhibka jira ayaa ah kii Shabaab ee la soo qabto, Wasiirka reerka iyo Xildhibaanka ayaa daba ordaya | Baydhabo Online
Madaxweynaha “Dhibka jira ayaa ah kii Shabaab ee la soo qabto, Wasiirka reerka iyo Xildhibaanka ayaa daba ordaya
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka digay in laga daba yimaado xubnaha ka tirsan Shabaab ee ay ciidanka dowladda soo qabtaan.
Madaxweynaha ayaa sheegay marka ciidanka dowladda ay soo qabtaan xubnaha ka tirsan Shabaab in ay ka daba yimaadaan Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo Ganacsato iyagoo ku doodaya in aysan wax dambi ah uunsan laheyn Shabaabka ciidanka dowladda ay soo qabtaan.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Somaliya in dowladda aysan heysan doonin qof dambi aan lagu heyn laakiin mararka ay dhacdo Shabaab ay soo xireen ciidanka dowladda in ay soo daayaan Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, kuwaas oo ku doodaya in ay garanayaan oo qofka wax dambi ah uusan laheyn.
“Anaga Mushkilad waxaan ku dhignay waan qabiilaysanahay, Shabaab waaye kii la dhaho ee la soo qabto, waa ladaba socdaa, Sheekha reerka, Xildhibaanka reerka, Wasiirka Reerka, Ganacsadaha reerka waa la daba socda, war adiga yaa kuu sheegay inuusan Shabaab aheyn ka leexo waa la baaraa haduu uusan wax dambi ah laheyn waa la soo deynaa oo cid haysanaysa malahan, laakiin hadii dambi lagu helo qaanuunka iyo sharciga noo yaalo ayaa la marsiinaa.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay Shabaab inay qaldeen dhalinyarada Somaliyed oo ay adeegsadaan falal guracan, sida inay u diraan xubnaha ehelkooda ah ee Dowladda ku jira oo ay uga diraan arimo jaajuusnimo iyo inay u adeegsadaan dilkooda.
Inta badan xubnaha Shabaabka ka tirsan ee Dowladda ay soo qabata ayaa waxaa u dooda xubno isla Dowladda ka tirsan, halka qaarkoodna si caadi ah looga sii daayo xarumaha Ciidamada.